खुसीको खबर : कोरोनाभाइरसले देखायो आफैं समाप्त हुने लक्षण! सेयर गरौ – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Health/खुसीको खबर : कोरोनाभाइरसले देखायो आफैं समाप्त हुने लक्षण! सेयर गरौ
भाइरसको जेनेटिक म्याटेरियल हराएको यस्तो घटना २००३ मा सार्स महामारी फैलिएपछि पनि देखिएको थियो । त्यसपछि विस्तारै सार्स महामारी समाप्त हुन थालेको थियो ।एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुलाई विश्वास छ कि यदि ठूलो परिमाणमा भाइरसको जिनोम सिक्वेन्स गर्ने हो भने यस्ता परिणाम अन्य स्थानबाट पनि पाइन सकिन्छ ।
अहिले भने कोरोनाभाइरस संक्रमणका केसहरु विश्वभर बढिरहेका छन् । अहिलेसम्म लगभग ४६ लाखभन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन् । अहिले भने कोरोनाभाइरस संक्रमणका केसहरु विश्वभर बढिरहेका छन् । अहिलेसम्म लगभग ४६ लाखभन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन् ।